फोनहरू जुन चार्जरबिना बेचिन्छ के टेलिफोनीको भविष्य पनि त्यस्तै हुनेछ? | Androidsis
निस्सन्देह हाम्रा भर्खरका पाठकहरू, वा तपाईंहरू जो यस विवरणमा निपुण छैनन्, राम्रोसँग डराउनुपर्नेछ कि हामीले फोन गरिरहेका अलिखित नियमलाई पहिले नै लागू गरिसकेका फोनहरू खरीद गर्दा। वास्तवमा, एक राम्रो मूल्यमा सबै भन्दा राम्रो विक्रेता मध्ये एक, मोटोरोला मोटो जी पावर चार्जर बिना बेचिएको। भन्नुपर्दा नयाँ प्याकेज टर्मिनलको बक्समा तपाईले पाउनुहुनेछ कि त्यहाँ केवल केबल मात्र यूएसबी जडान हो। यदि तपाईंसँग कम्प्युटर, वा बाह्य ब्याट्री छैन भने, तपाईं आफ्नो मोबाइल चार्ज गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
यद्यपि यो सत्य हो कि प्राय जसो स्टोरहरूमा यी प्रकारका टर्मिनलहरू बेचिन्छन् जुन लागू हुन्छ पावर प्लग समावेश नगर्न नियम बक्स भित्र यो चेतावनी दिइएको छ, धेरै अन्य मा क्रेता पर्याप्त ध्यान दिनुहुन्न र उसले घरमा प्याकेज प्राप्त गरेको खण्डमा मात्र अचम्मित हुन्छ। र यदि यो शनिबार हो र त्यहाँ सामानहरू खरीद गर्न अब ठाउँ छैन भने, तपाईंले सोमबारसम्म पर्खनु पर्नेछ तपाईंको नयाँ मोबाइलको गहिराइमा जान्न। तर मोटोरोलाको मामला बाहेक यो लाग्दैन कि यो रणनीति अलग्गै छ र केवल केही ब्रान्डको सानो प्रासंगिकतामा केन्द्रित छ। बरु पूर्ण उल्टो। यदि मोटोरोला थीसिसको साथ जारी राख्न इच्छुक छ भने, अर्को छिट्टै थप गर्न सकिने सियाओमी हो।
जस्तो स्पेनमा अहिले पनि बैंक टेलरहरूको मुद्दामा भइरहेको छ, यदि ठूला बैंकले कार्यान्वयन आयोगको थेसिस लागू गरे भने, बाँकीहरूले विचारमा अनुसरण गर्नेछन्। मोबाइल विश्वमा हामी त्यस्तै परिदृश्य फेला पार्न सक्दछौं। विशेष रूपमा, यो मलाई ठूलो समस्या जस्तो देखिदैन कि मोबाइल फोनले यस सहयोगी ल्याउँदैन, बरु उल्टो। सबै पछि, विकल्पहरू भौतिक स्टोरहरू र अनलाइन स्टोरहरूमा धेरै हुन्, र तपाईं यो एकै समयमा पनि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं आफ्नो मोबाइल खरीद गर्नुहुन्छ जब तपाईं घर पुग्दा डराउनु हुँदैन।
यदि तपाईंलाई त्यो समय याद छ जब नोकियाले बजारमा सबै भन्दा राम्रो फोनहरू बेच्छ, त्यहाँ संस्करणहरू थिए जसमा टर्मिनल बक्समा संगीतको मजा लिन र टर्मिनलबाट धेरै प्राप्त गर्न थुप्रै सामानहरू आएका थिए। खेलहरूको लागि मोबाईल फोनको बूम पनि थियो, जुन तिनीहरूको विशेष जोइस्टिकसँग समाप्त भएन। त्यस बेला देखि र आज सम्म, यो महसुस नगरी पनि कम्पनीहरूले मूल्यको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न थोरै सम्भाव्य सामानहरू समावेश गर्ने प्रवृत्तितिर अघि बढेका छन्। यी उत्पादनहरू कत्तिको प्रतीकात्मक हुन सक्छन्, जहाँ बजारमा हरेक यूरो गणना यो त्यस्तो चीज हो जुन उनीहरूले गर्न सक्दैनन्।
त्यो अर्थमा, भिन्नता सहायक टर्मिनल सहित स्मार्टफोनको सम्भावना बढाउन बजारमा काम गरेको छैन। हो, उत्तम मूल्यमा बिक्रीको थेसिस छ। तसर्थ, इमान्दारीताका साथ, म विश्वास गर्दछु कि हामी भविष्यको लागि बाँच्दैछौं जसमा मोबाइल फोनले इलेक्ट्रिक चार्जर मात्र समावेश गर्दैन, तर सायद यूएसबी केबलहरू वा बक्सहरूमा प्रत्यारोपित जडानको प्रकार पनि बक्सहरूबाट हराउनेछ। मानकको रूपमा केहि बर्ष। अवश्य पनि, म विश्वस्त छु कि यो थीसिस केवल कम-अन्त वा मध्यम-कम दायराको लागि मान्य हुनेछ, उच्च-अन्तका मानिसहरू सबै चीज लिएर आउनेछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » फोनहरू जुन चार्जरबिना बेचिन्छ के टेलिफोनीको भविष्य पनि त्यस्तै हुनेछ?
वाह, कति आईफोन एक चार्जर बिना आउँछ?
जैमे सैन्टे-मैरी आर (@jsaintemarie) भन्यो
तर के कसैलाई फोन 'पीसमील' किन्न एब्सुरड लाग्छ? त्यस्तो समयमा के भयो जब तपाइँले सबै चीजहरूसँग एक उत्पादन किन्नुभयो जुन तपाइँलाई मिनेट १ बाट प्रयोग गर्न सक्षम हुन आवश्यक पर्दछ र सामानहरू स around्कलन वरिपरि जानु हुँदैन (अन्यथा महत्त्वपूर्ण, जस्तै CHARGER!) स्टोरहरूमा? किनभने पछि पनि तिनीहरू बाहिर आए कि यो आधिकारिक चार्जर हुनु पर्छ ताकि उपकरणहरू बिगार्न नपरोस्, र हामी वास्तवमै कारखानाबाट आउने कुराको लागि ओभरपाई गरिरहेका छौं। यी बेवास्ता कार्यहरूको समर्थन गर्न यो पर्याप्त छ, किनकि फोनमाeयूरो बचत गरेर तपाईले चार्जरमा २० खर्च गर्नुहुन्छ, हेडफोनमा 1०, ब्लुटुथमा spending० ... (म चिलीबाट लेख्दै छु, माफ गर्नुहोस् यदि मान रूपान्तरण पूर्ण रूपमा सटीक हुँदैन)।
जैम सेन्टे-मैरी आर (@jsaintemarie) लाई जवाफ दिनुहोस्
के चार्जरहरू असक्षम छन्?
ओस्डेडलाई जवाफ दिनुहोस्
Oneplus एक चार्जर बिना (केवल USB केबल) आउँछ र उच्च-अन्त हो।
मलाई राम्रो लाग्दछ किनभने अन्तमा तपाईं घर १ 17 विभिन्न चार्जरको साथ अन्त गर्नुहुन्छ, प्रत्येक खरीदको लागि तपाईं प्रत्येक ग्याजेटको लागि।
अवश्य पनि, सबै मोबाईलहरू सबै यूएसबी केबलहरूसँग उपयुक्त हुनुपर्दछ, वा असम्भवताहरू सिर्जना गर्न केहि पनि छैन किनभने (वा सुनको मूल्यमा छुट, जस्तै एप्पलले भनेका छ)।
र बचत एकै ठाउँमा, पेट्रोलियम उत्पादनहरूको कम खपत, कम प्रदूषण, आदि ... जुन राम्रो पनि छ!
स्मार्टइन्नोभासियन ™ भन्यो
यो ब्रान्ड र टर्मिनलको मूल्यमा निर्भर गर्दछ र अल्ट्रासोनिक चार्जरहरूसँग कम केही ब्रान्डहरू बाहिर निकालिरहेको छ।
SmartInnovacion Resp लाई जवाफ दिनुहोस्
Android Lollipop मा भर्खरका अनुप्रयोगहरूसँग विजेट कसरी सिर्जना गर्ने